Sawirro: Kenya oo Ka Hadashay Weerarkii Shalay Ka Dhacay Lamu. – Shabakadda Amiirnuur
November 29, 2017 6:14 am by admin Views: 141
Iyadoo maalintii shalay 3 gaari dowladda Kenya looga gubay Lamu ayay saraakiishooda Bolisku sheegayaan in laga dilay labo sarkaal oo la socday gaadiidka dad weynaha oo ay galbinayeen si looga ilaaliyo in Al-Shabaab ay dilaan rakaabka aan muslimiinta ahayn.
Larry Kieng oo ah taliyaha ciidamada Booliska xeebta ayaa sheegay in cidankan iyo gaadiidka ay galbinayeen ay dagaalka kula kulmeen degaanka Larry Kieng.
Sarkaalkan ayaa Xarakada Al-Shabaab askartooda ku eedeeyay weerarkan waxaana uu sheegay in marka laga yimaado dhimashada labada sarkaal ay ka dhaawacmeen laba askari oo kamid ahaa ciidamo usoo gurmaday kolonyada jidka loo galay.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Al-Shabaab ay dadkii rakaabka ahaa u qeybiyeen waraaqo digniin ah iyagoo xirnaa dharka milatariga ee Keymaha lagu joogo.
Qof kamid ah dadkii rakaabka ahaa ayaa waxa uu yiri: “waxaan markii hore moodeynay ciidamada Kenya, balse markii ay rasaasta billaabeen ayaan ogaannay in ay Al-Shabaab yihiin innagoo ka baqaynay iney askar qafaashaan”.
Intaasi kadib gaadiidkii rakaabka ahaa ee weerarkaas la kumay ayaa la geeyay magaalada Witu, halkaasoo safarkooda loo wareejiyay si amaankooda loo xaqiijiyo waxaana dib u dhacay safarkii ay ugu socdeen Mombasa.
Saraakiisha Boliska ee Kenya ayaa lasoo daahay warkan kadib markii maalintii shalay laga gubay 3 gaari oo nooca ciidamada Boliska ah iyadoo sidoo kale laga dilay tiro askar ah.
Kenya ayaa u taag heli la’ weerarada kala duwan ee ay ciidamada Al-Shabaab ka geystaan dhulka Xeebta ah iyo gobolka gumeysiga ku jira ee Soomaaliyeed ee ay ula baxday wuqooyi galbeed.